Kala hadalka imaamada masjidyada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Masaajid ku yaal Stockholm, Keydka: Scanpix
Kala hadalka imaamada masjidyada
La daabacay onsdag 16 maj 2012 kl 10.08
Caawa ayaa Tv-ga dalkan laga soo deyn doona barnaamij looga hadlayo kala duwaanashaha fikirada Imaamada ka hawl gala misaajidyada ku yaal dalkan Sweden oo qaar kamidii ay yihiin Somali kamarad qarsoon wax looga duubay, kuwaaso bixiyey warbixino is khilaafsan. Sidee bay samaynaysaa gabadha fara xumaynta loo geeysta, taaso la rabay in lagu ogaado in iimaamadani ay u hogaansanyiin sharciga u yaala dalkan, taaso la ogaaday in lix kamida tobankii iimaamba ay jabinayaan sharciga u yaala dalkan, taaso lagu ogaaday markii kamarad qarsoon wax looga duubay.
Kamarad qarsoon ayaa laga duubay iimaamo badan yadoo la waydiinayo waxyaabo ay ka mid yihiin:
Sideebu islaamku u arkaa in u ninku guursado tira kabadan hal xaas, sidoo kale waxaa ka mid ahaa suaalaha la waydiiyey masuuliyiintan matalayey masaajido kala duwan oo gabi ku yaal magaalooyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin Uppsala, Göteborg, Stockholm.
Mid kamida masuuliyiintaas la waraystay oo lagu magacaabo Ibrahim Buraale kana hawl gala masjidka Somalida ee ku yaal Rinkeby oo aanu wax ka waydiinay arinkan ayaa noo sheegay in loo soo diray laba gabdhood uu xidhan niqaabka ( Indha-shereerka ) kuwaaso ahaa qaar hoosta ku haystay kamarada qarsoonida wax u duubta.
- Ujeedadii way naga gaadheen mudana way na daba socdeen oo waxay rabeen in ay soo saaraan waxyaabaha muslinka lagu xanto oo ay ka mid yihiin in aanu dumarka dilno, balse ilaahay waxan ka rajaynayaa in uu kheyr iyo cibro nooga dhigo oo aanu wax ku barano, ayuu sheegay Ibrahim Buraale mar u la hadlay idaacada Radi sweden qaybteeda Somaliga.
Barnaamijkan ayaa caawa laga soo deyn doona Tv-ga Svt, saacadu markay tahay 20:00.
Sagaal ka mid ah tobankan imaam ayaa sheegay in ninku xaq u leeyahay in u guursado dumar ka badan hal, halka hal imaam ku jawaabay.
Waxa kale oo barnaamijka ku jira qolooyin kala hadlaya oo marka kamarada qarsoon looga duubo si u hadlaya marka caadii loo waraystana wax kale sheegaya.
Maamuula Islamiska förbundet Stockholm ayaa markii madaxdooda la wargaliyey sida imaam ka tirsani u hadlay go'aansaday in ay imaamkaas shaqada ka xidhan isla markaasna baadhitaan sameeyaan.
SVT / EKOT / SRI/ SOMALISKA